နီးလွန်းလို့ မမြင် သတိမထားမိတဲ့ အာလူးကြော်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ . . . - Hintharmedia
နီးလွန်းလို့ မမြင် သတိမထားမိတဲ့ အာလူးကြော်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ . . .
အာလူးကြော်ဆိုရင်တော့ မကြိုက်တဲ့လူ အတော်ကိုရှားမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေတွေ့တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားစရာအဖြစ် စားလေ့ရှိကြသလို၊ ကော်ဖီနဲ့တွဲဖက်ပြီး အဆာပြေစာအဖြစ် စားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တာမို့ အမြဲလိုလို စားဖြစ်ကြတဲ့ စားစရာတစ်ခုပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အာလူးကြော် ရောင်းချမှု ဈေးကွက်က USD ၁၆ သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် အာလူးကြော်တွေလိုမျိုး အာလူးကြော်ပြုလုပ်နည်း လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို 1817 ခုနှစ်မှာ William Kitchiner ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ နာမည်က The Cook’s Oracle လု့ိခေါ်ပြီး အင်္ဂလန်နဲ့ အမေရိကမှာ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ စားကြတဲ့ အာလူးကြော်ပါးပါးအချပ်လေးတွေကို စတင်ဖန်တီးခဲ့တာကတော့ George Crum လို့ခေါ်တဲ့ စားဖိုမှူးတစ်ဦးပါ။ ၁၈၅၃ ဝန်းကျင်လောက်မှာ အာလူးတွေကို ပါးနိုင်သမျှ ပါးတဲ့အချပ်လေးတွေ လှီးပြီး ဆားနဲ့နယ်ပြီး ကြော်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရသာကို စားသုံးသူတွေက အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀ ရာစု ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အိမ်မှာရော၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာပါ အာလူးကြော်စာသုံးမှု အရမ်းများလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၁၀ မှာ အမေရိကတိုက်ရဲ့ ရှေးအကျဆုံး အာလူးကြော်ထုတ်လုပ်မှု ကုပ္မဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Mike-sell’s Potato Chip Company ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
အရသာတွေပါဝင်တဲ့ အာလူးကြော်ကို စတင်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ချိစ်အရသာ၊ ကြက်သွန်၊ဆားနဲ့ ဗနီဂါ အရသာ အာလူးကြော်တွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ BBQ အရသာ အာလူးကြော်တွေကိုတော့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာလူးကြော်တွေမှာ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်ထားတာကြောင့် အစားများရင် သွေးတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆားပါဝင်တဲ့ အရသာမှုန့် အနည်းငယ်သာ ထည့်သွင်းထားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Salt ‘n’ Shake ဆိုတဲ့ တံဆိပ်မှာတော့ ဆားပါဝင်မှု မဆိုသလောက်သာ ထည့်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာလူးကြော်ဟာ လူကြိုက်များသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ထိခိုက်စေတဲ့ စားစရာတစ်ခုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခြေလှမ်း ၁၀,၀၀၀ လမ်းလျှောက်ရင် ၃၀၀ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းပေမယ့် အာလူးကြော်စားထားရင်တော့ ၁၅၀ ကယ်လိုရီကိုပဲ လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာလူးကြော်စားခြင်းကြောင့် ဝိတ်တက်စေတာကတော့ လူသိအများဆုံး ကျန်းမာရေး ပြသနာတစ်ခုပါပဲ။ အာလူးကြော်ဟာ စွဲလန်းစေတတ်တာကြောင့် စားပြီးတိုင်း စားချင် ဖြစ်တဲ့အခါ ပိုပိုပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အာလူးကြော်ကို တစ်ပတ်မှာ ၂ ရက်ထက်ပိုပြီး စားသုံးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေဖို့ အာလူးကြော်စားသုံးခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချသင့်ပါတယ်။
နီးလြန္းလို႔ မျမင္ သတိမထားမိတဲ့ အာလူးေၾကာ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြ . . .
ယခင်ဆောင်းပါးစိတ်ကုန်သွားပြီဆို ဒီ အချက်လေးချက်ကို သတိရပါ
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးဆောင်းရာသီအတွက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းများ